विदेश - नारी
परिवर्तनका लागि संसद्मा महिला
विश्वमा अझ धेरै महिला सांसदको आवश्यकता भएको राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुथ्रेसले बताएका छन् । विश्व संसद्वादको सन्दर्भमा दिएको सन्देशमा उनले संसद्मा महिलाहरूको उपस्थिति बलियो हुँदा मात्र उनीहरूको अवस्था परिवर्तन हुने बताए । गुथ्रेसले आफ्नो सन्देशमा भनेका छन्–‘अझै पनि विश्वका संसद्हरूमा पुरुष सांसदकै बाहुल्यता छ, ती स्थानमा अब बढीभन्दा बढी महिला सांसद हुन जरुरी छ । यसबाट मात्र विश्वमा महिलाको वर्तमान अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन आउनेछ । राजनीतिमा महिला सहभागिता बढेको भन्दै उनले संख्यात्मक रूपमा हेर्दा यसको अवस्था सन्तोषजनक भए पनि संसद्मा महिलाको सहभागिता भने बढाउन नसकिएको उल्लेख गरेका छन् ।
नारी संवाददाता , असार ५, २०७६
दक्षिण एसियाली तारा प्रो.डा. होस्नेआरा
१७ सयभन्दा बढी शाखा, ३३ हजार कर्मचारी, १० हजार करोड वार्षिक कारोबार गर्ने दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो महिला संस्था हाँकिरहेकी प्रो.डा. होस्नेआरा बेगमको जीवनकथा निकै मर्मस्पर्शी छ । दक्षिण एसियाली महिलाहरूकी रोल मोडल बन्न सफल होस्नेआरा मृत्युको मुखबाट जोगिएको आफ्नो जीवन यसरी सदुपयोग गरेको बताउँछिन् ।
मेक्सिकन सुन्दरीलाई मिस वल्र्ड
चीनको सान्या सहरमा सञ्चालित ६८ औं संस्करणको विश्वसुन्दरी प्रतियोगिताको शीर्ष उपाधि २६ वर्षीया मेक्सिकन सुन्दरी भेनिसा पोन्स डे लियनले जितेकी छिन् । भेनिसा विश्व सुन्दरीको उपाधि जित्ने पहिलो मेक्सिकन युवती हुन् ।
नारी संवाददाता , मंसिर २७, २०७५
नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउने उनीहरू दुवै जघन्य सामाजिक अपराध मानिने बलात्कारविरुद्ध लडिरहेका योद्धा हुन् । पछिल्ला दिनमा बलात्कार एउटा महामारीका रूपमा फैलन थालेको छ । यो महामारीको चपेटामा वृद्धवृद्धा, बालबालिकादेखि युवा महिलाहरू सबै पर्न थालेका छन् ।
नारी संवाददाता , कार्तिक २७, २०७५
जो डराएनन् गोरा
‘सुन्दरता हिजाब र बुर्कापछाडि पनि लुकेको हुन्छ’ भन्ने सन्देश दिने उद्देश्यले केही समयअघि अमेरिकी डल कम्पनी मटेलले हिजाब लगाएका बार्बी डल सार्वजनिक गर्‍यो । यसको श्रेय जान्छ सन् २०१६ को रियो ओलम्पिक्समा हिजाब लगाएरै प्रतिस्पर्धा गर्ने र कांस्य पदक जित्ने ३२ वर्षीया अमेरिकी फेन्सिङ खेलाडी इब्तिहाज मुहम्मदलाई । उनकै कारण अमेरिका धार्मिक सहिष्णुताको सन्देश दिन सफल भयो ।
महिला सशक्तीकरणका लागि
‘मी टु’ संस्थाका रूपमा भने त्यसअघि नै स्थापना भैसकेको थियो । ‘गर्ल फर जेन्डर इक्विटी’ की संस्थापिका तराना बुर्कले सन् १९९७ मा आफ्नै आमाको ‘ब्वाइफ्रेन्ड’ बाट पटक—पटक यौन उत्पीडनको सिकार भएकी युवती हेभेनको कथा सुनेकी थिइन् । त्यही कथाले उनलाई सन् २००६ मा ‘मी टु’ संस्था स्थापना गर्न प्रेरित गरेको थियो ।
नारी संवाददाता , आश्विन ८, २०७५
आफ्नो देशका खेलाडीहरूको मनोबल बढाउन कोलिन्डा रसिया पुगेकी थिइन् । विश्वकप अवधिभर उनी चर्चामा रहिन् । त्यसको कारण थियो ड्रेसिङ रुममा पुगेर खेलाडीको मनोबल बढाउनेदेखि सुटुक्क भिआइपी कक्ष छाडी दर्शकदीर्घामा पुगेर आफ्नो देशलाई चियरअप गर्नेसम्मका उनका गतिविधि जो एउटा राष्ट्रपतिबाट सायदै कसैले अपेक्षा गरेका थिए ।
नारी संवाददाता , भाद्र ८, २०७५
लक्ष्मी भण्डारी थापा, असार २७, २०७५
सबैकी प्रिय एलेन डिजेनेरस
एलेनको कार्यक्रममा एकपछि अर्को हृदयविदारक कथा आइरहन्छ । यस्तै अर्का बालक टेइट एन्डर्सनको कथाले पनि सिंगो विश्वलाई नै भावुक बनायो । मुटुको बायाँ भेन्ट्रिकलबिना जन्मिएका एन्डर्सनको बाल्यकाल निकै कष्टपूर्ण थियो । नाजुक आर्थिक अवस्थाका कारण उनको शल्यक्रिया पनि हुन पाइरहेको थिएन ।
विभु लुइटेल, असार ११, २०७५
भारतीय रक्षामन्त्री निर्मला सीतारमण स–साना व्यवहार निर्वाह गर्नेदेखि लिएर विशाल राष्ट्र भारतको सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने र तिनको व्यवस्थापन गर्नेसम्मको काममा उत्तिकै पोख्त छिन् । ३ सेप्टेम्बर २०१७ मा भारतकी प्रथम महिला रक्षामन्त्री बन्न सफल निर्मला भारतीय जनता पार्टीका तर्फबाट आन्ध्रप्रदेश र कर्नाटकको सभासद, पार्टी प्रवक्ता हुँदै सन् २०१४ मा उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री बन्न सफल सीतारमण एक सन्तानकी आमा हुन् ।
नारी संवाददाता , चैत्र १४, २०७४
प्राणी जगत्मा प्रेम अपरिहार्य मानिन्छ । अझ मानव समाजमा प्रेमको महत्वको कुरा गरिसाध्य छैन । एउटा भनाइ छ–‘कसैको गहिरो प्रेमबाट शक्ति मिल्छ, कसैलाई गहिरो माया गर्दा साहस मिल्छ ।’ विश्वमा प्रेममा नपरेका मानिस भेट्न मुस्किलै छ । सानो वा ठूलो जुनसुकै मानिस प्रेममा परिरहेको हुन्छ ।